अर्घाखाँची घटनामा मेरो हात छैन, वक्ता र जनता दुबै दोषी– टोपबहादुर रायमाझी - Everest Dainik - News from Nepal
अर्घाखाँची घटनामा मेरो हात छैन, वक्ता र जनता दुबै दोषी– टोपबहादुर रायमाझी
सीमांकनको प्रस्ताव पार्टीको नभई सरकारको भएको जिकिर, विपक्षमा मत हाल्ने घोषणा
काठमाडौं, माघ १ । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्व उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले अर्घाघाँचीमा भएको ढुंगामुढाको घटनाको निन्दा गरेका छन् ।
गत पौष २८ गते उर्जामन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा तथा माओवादी नेता डिलाराम आचार्यमाथि अर्घाखाँचीको महोत्सव उद्घाटनका क्रममा ढुंगामुढा भएको घटना दुर्भाग्र्यपूर्ण भएको उनले टिप्पणी गरे ।
एभरेष्टदैनिक डटकमसँग कुरा गर्दै नेता रायमाझीले स्थानीय जनताको मनोविज्ञानविपरित वक्ताहरुले सम्बोधन गरेका कारण ढुंगामुढा भएको दावी गरे । “स्थानीय जनताको मनोविज्ञान एउटा छ, डिलारामजीले त्यसको विपरित बोल्नुभएछ । ५ नं. प्रदेश टुक्र्याउन नहुने पक्षमा रहेका जनताका बीचमा त्यसरी बोलेको कारण घटना घटेको देखिन्छ ।” उनले भने ।
नेता रायमाझीले घटनाका पछाडि आफ्नो नरहेको स्पष्ट पारे । तपाईकै मान्छेहरुले नियतवश आक्रमण गरेको चर्चा पनि छ नि ? भन्ने प्रश्नमा रायमाझीले उक्त घटना दुर्भाग्यपूर्ण भएको र आफूले त्यसो गराउने कुरा कल्पना पनि गर्न नसक्ने बताए । “मलाई प्रमुख अतिथीका रुपमा महोत्सवको उद्घाटन गर्न निमन्त्रणा गरिएको थियो, तर म कार्यव्यवस्तताका कारण जान सकिनँ” उनले भने, “पछि उद्घाटन बालकृष्ण खाँड या अरु मन्त्रीबाट गराउने तर समापनमा मलाई नै आइदिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए स्थानीयस्तरबाट ।” उनले बताए । रायमाझीले के कति कार्यव्यस्तताका कारण आफ्नो गृह जिल्लामा आयोजित कार्यक्रममा जान नसकेको हो भन्ने कुरा भने खुलाएनन् ।
याे पनि पढ्नुस यस्तो रहेछ टोपबहादुरको असन्तुष्टि ?
पार्टीले नै तपाईलाई नपठाएको हो र ? भन्ने प्रश्नमा रायमाझीले सहभागी भएका उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा समेत पार्टीको निर्णयबाट नभई स्थानीयले आमन्त्रण गरेर गएको बताए । “पछि वहाँले डिलारामलाई समेत लगेर जानुभएछ । डिलारामजीले जनभावनाविपरित उनीहरुको मनोविज्ञान नबुझेर भाषण गरेछन् । त्यसपछि दुर्भाग्यपूर्ण घटना भयो ।’ उनले भने, “यसमा मेरो नाम जोडिनु पनि दुर्भाग्यपूर्ण नै हो ।”
अर्घाखाँची घटनामा नेता डिलाराम आचार्यको सम्बोधन र त्यसपछिको दृश्य
डिलाराम आचार्य र टोप बहादुर रायमाझी दुबैको गृह जिल्ला अर्घाखाँची हो । मसालको राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका दुबै नेता पछि माओवादी प्रवेश गरेका हुन । डिलाराम आचार्य भने माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादी बनेका थिए ।
याे पनि पढ्नुस मन्त्री बन्न लालायित छैन : रायमाझी
एउटै गृह जिल्ला भएकोले डिलाराम आचार्यसँग राम्रो सम्बन्ध नभएका कारण आफू प्रमुख अतिथी भएको कार्यक्रममा डिलारामलाई लगेका कारण त्यसको बिरोध गर्नुपर्ने जनमत टोपबहादुर रायमाझीले सिर्जना गरेको भन्ने माओवादी भित्र चलेको हल्लाको भने रायमाझीले खण्डन गरे । “यो गलत प्रचार हो,
डिलारामजीले नै जनताको मतविपरित बोले । त्यसैले यो घटनामा वक्ता र जनता दुबै दोषी छन् ।”
संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा मत हाल्ने
नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावमा भने नेता रायमाझीले विपक्षमा मत हाल्ने संकेत गरेका छन् । एभरेष्टदैनिकडटकमसँग कुरा गर्दै नेता रायमाझीले भने, “यो ५ नं. प्रदेश टुक्रयाउने कुरामा मेरो सहमति छैन । यो संघीयताको मर्मविपरितको प्रस्ताव हो । यो जुनसुकै प्रक्रियामा गएपनि मेरो समर्थन हुन्न ।” रायमाझीले उक्त प्रस्ताव पार्टीको नभई सरकारको भएको बताए । माओवादी पार्टीका अध्यक्ष नै सरकारको समेत नेतृत्व गरिरहेपनि यो पार्टीको निर्णय नभई विशुद्ध सरकारको निर्णय भएकोले आफूलाई ह्विप नलाग्ने उनको जिकिर थियो ।
याे पनि पढ्नुस मन्त्री पाण्डेको प्रश्न टोपबहादुरलाई– अध्यक्ष प्रचण्डले संसदमा लगेको कुरा पार्टीको होइन भन्ने मिल्छ ?
“कतिपयले यसलाई माओवादी केन्द्रको प्रस्तावका रुपमा लिएका छन् । तर यो पार्टीको नभई सरकारको प्रस्ताव हो । यसको बिरोध गर्न अनुशासन उल्लंघन गरेको मानिन्न ।” रायमाझीको तर्क छ, “पार्टीको निर्णय भए कुन कमिटिमा कहिले यो निर्णय भयो हुनुपर्ने होइन र ?” उनले प्रतिप्रश्न गरे ।
पार्टीले औपचारिक निर्णय नगरेपनि व्यवस्थापिका संसदमा यस विषयमा पार्टीकै सांसदका नाताले उनको भूमिका के हुन्छ त भन्ने विषयमा समेत रायमाझीले आफूले सरकारी प्रस्तावको विरुद्धमा नै मतदान दिने स्पष्ट गरे । “म यो सीमांकनको प्रस्तावको पक्षमा छैन । ५ नं. प्रदेशको प्रस्ताव अर्थात् मधेसलाई पहाडबाट अलग गर्ने प्रस्ताव संघीयताको मर्म विपरितको प्रस्ताव हो । त्यसैले त्यसमा मेरो सहमति हुन्न ।” उनले स्पष्ट गरे ।
ट्याग्स: Arghakhanchi incident, Dilaram Acharya, top bahadur rayamajhi